1. Ar Rahmaan
2. 'Allamal Quran
4. 'Allamahul bayaan
7. Wassamaaa'a rafa'ahaa wa wada'al Meezan
10. Wal arda wada'ahaa lilanaam
11. Feehaa faakihatunw wan nakhlu zaatul akmaam
12. Walhabbu zul 'asfi war Raihaan
13. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan
16. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan
18. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan
21. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan
22. Yakhruju minhumal lu 'lu u wal marjaan
23. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan
24. Wa lahul jawaaril mun sha'aatu fil bahri kal a'laam
25. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.
26. Kullu man 'alaihaa faan
28. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.
29. Yas'aluhoo man fissamaawaati walard; kulla yawmin huwa fee shaan
30. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.
32. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.
33. Yaa ma'sharal jinni wal insi inis tata'tum an tanfuzoo min aqtaaris samaawaati wal ardi fanfuzoo; laa tanfuzoona illaa bisultaan
34. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.
35. Yursalu 'alaikumaa shuwaazum min naarinw-wa nuhaasun falaa tantasiraan
36. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.
37. Fa-izan shaqqatis samaaa'u fakaanat wardatan kaddihaan
38. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.
39. Fa-yawma'izil laa yus'alu 'an zambiheee insunw wa laa jaann
40. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.
41. Yu'raful mujrimoona biseemaahum fa'yu'khazu binna waasi wal aqdaam
42. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.
45. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.
47. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.
49. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.
50. Feehimaa 'aynaani tajriyaan
51. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.
53. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.
54. Muttaki'eena 'alaa furushim bataaa'inuhaa min istabraq; wajanal jannataini daan
55. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.
57. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.
59. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.
60. Hal jazaaa'ul ihsaani illal ihsaan
61. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.
63. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.
65. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.
66. Feehimaa 'aynaani nad daakhataan
67. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.
69. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.
71. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.
73. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.
75. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.
76. Muttaki'eena 'alaa rafrafin khudrinw wa 'abqariyyin hisaan
77. Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.